ဘက်ထရီနှင့် ဘက်ထရီပြဿနာ | Bezzia
ဘက်ထရီနဲ့ ဘက်ထရီက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာပါ။
မာရီယာ vazquez | | လက်ဆောင်
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် ဘက်ထရီသုံးပါတယ်။. မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ၊ နားကြားကိရိယာ၊ မီးဖိုချောင်အကြေးခွံများ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်များ အစရှိသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူ သို့မဟုတ် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော စက်ပစ္စည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်... သို့သော် ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲသတိမပြုမိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဘက်ထရီနှင့် ဆဲလ်များ၏ အန္တရာယ်ကို မသိကြပါ။ အထူးသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ဘက်ထရီများသည် အခါအားလျော်စွာ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် လက္ခဏာရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်လိုက်သည်နှင့် ဘက်ထရီများကို စွန့်ပစ်လိုက်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အဆိပ်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတယ်။
2 အဲဒါတွေကို ဘယ်လို recycle လုပ်မလဲ။
3 တစ် ဦး ချင်းတာဝန်
ဘက်ထရီ၊ ဓာတ်ခဲ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပေါင်းစက်များကဲ့သို့သော အခြားသော အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့၊ သတ္တုများနှင့် အဆိပ်သင့်သော ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။. မာကျူရီ၊ ကဒ်မီယမ်၊ နီကယ် သို့မဟုတ် ခဲတို့သည် ဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး လူသားများတွင် ကျယ်ပြန့်သော အခြေအနေများနှင့် ရောဂါများကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ကောင်းမွန်စွာ မကုသပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သူက ဘက်ထရီ၏မမှန်ကန်သောကုသမှု သူတို့ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါ ဘက်ထရီက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပြင်ပတွင် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် အမှိုက်များ အချဉ်ဖောက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အော်ဂဲနစ် ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသော ညစ်ညမ်းမှု ဓာတ်ပေါင်းဖိုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပတွင် သက်ရောက်သော ပိုက်များတွင် သံချေးတက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို သီးခြားကွန်တိန်နာအတွင်း မစွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့် အမှိုက်ပုံများတွင် ကုန်ဆုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒါကဘယ်လို လေးလံသောသတ္တုများသည် မြေထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားကြသည်။မြေအောက်ရေလွှာများ၊ မြစ်များနှင့် ပင်လယ်များတွင် အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်များ၏ သက်ရှိပုံစံအားလုံးကို ညစ်ညမ်းစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့သည် ရေတို၊ အလတ်စားနှင့် ရေရှည်ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသော လူသားများက စုပ်ယူသွားကြသည်။
အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ စွန့်ပစ်လိုက်သော ညစ်ညမ်းသည့် ဘက်ထရီများ၏ ပမာဏကို တွေးကြည့်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် မာကျူရီ၏ 93% ၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ကို သိရန် လုံလောက်ပါသည်။ ပြည်တွင်းအမှိုက်၊ ဇင့် 47%၊ Cadmium 48%၊ Nickel 22% စသည်ဖြင့်၊
အဲဒါတွေကို ဘယ်လို recycle လုပ်မလဲ။
အသုံးပြုပြီးသားဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မြေဆီလွှာနှင့် ရေနေသတ္တဝါများကို ညစ်ညမ်းစေသော ဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့်သာမက ပြန်လည်ရယူ၍မရနိုင်သောကြောင့်၊ ဖြစ်ထွန်းမှုသံသရာကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါ။ ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ကြမ်းများသည် ပို၍ရှားပါးလာပြီး တန်ဖိုးကြီးလာသည်။
နိုင်ငံသားများအနေနှင့် ဤဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် တာဝန်ရှိပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်နိုင်ခြေများရှိသည်။ ဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများအတွက် စုဆောင်းမှတ်များ သူတို့က ပိုပိုပြီး များပြားလာတယ်။ ၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းသောနေရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့မြို့များ၏လမ်းများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ မြို့တော်ခန်းမများနှင့် အခြားအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
အနီးစပ်ဆုံး စုစည်းမှုအမှတ် ဘယ်မှာရှိလဲ မသိပါ။ မြို့တော်ခန်းမမှာဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Ecopilas တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် သင့်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင့်အား လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် ဤအမှိုက်စုဆောင်းမှုအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနီးဆုံးစုစည်းမှုအမှတ်များ။
ကွန်တိန်နာများကို ဖယ်ရှားရန်၊ အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ဤပုံမှန် စုဆောင်းမှုအချက်များ တောင်းဆိုသည်။ ပြီးတော့ အမှိုက်တွေကို သယ်သွားတယ်။ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း အပင်များ တော်ဝင်အမိန့် 106/2008 ကို လိုက်နာကြောင်း အာမခံပါသည်။
တစ် ဦး ချင်းတာဝန်
ထို့အပြင် တာဝန်မကျေပွန်ခြင်း။ ဤဘက်ထရီများကို စုဆောင်းသည့်နေရာများတွင် အပ်နှံပါ။ နောက်ထပ်ကုသမှုအတွက်၊ ဤပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် အခြားတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်..။
ဆိုလာစွမ်းအင်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို သုံးပါ၊ စျေးကွက်မှာ ပိုပိုပြီး များပြားလာပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အရာများကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ စွမ်းအင်ရှုထောင့်မှပိုမိုထိရောက်သည်။
ဘက်ထရီအသုံးပြုရာတွင်၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် တစ်ခါသုံးပစ္စည်း 300 ကို အစားထိုးနိုင်သောကြောင့် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ပါ။
မသိနားမလည်ခြင်းဆိုသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချို့သောထုတ်ကုန်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိမပြုမိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို သင်သိလာသောအခါ သင်အသုံးပြုပုံ ပြောင်းလဲသွားပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » ဘက်ထရီနဲ့ ဘက်ထရီက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာပါ။
ဧည့်ခန်းကို လင်းထိန်စေရန် ဖန်ကမ္ဘာလုံး မီးချောင်းများ လောင်းကစားပါ။